Benuwe nwere ike ịkwụsị mmekọrịta ha na ndi Ugwu Awụsa maka ogbugbu ndi be ha – hoo!haa!!
Benuwe nwere ike ịkwụsị mmekọrịta ha na ndi Ugwu Awụsa maka ogbugbu ndi be ha
MAKURUDI: Iwe maka ogbugbu a na-egbu ndi be ha ka ọkụkọ emeela ka ndi ndu ndi Benuwe Steeti nye Gọọmentị Steeti ahụ ntuziaka ka ha gbubie mmekọrịta dị na agbata ha na ndi ugwu Awụsa, ma ọ bụrụ na ogbugbu ahụ gaa n’ihu. O wutere ha bụ na o were ndi Gọvanọ Ugwu Awụsa izu ụka atọ tupu ha abịara ha mgbaru maka madụ iri asaa n’atọ ndi na-achị ehi gburu, ruo taa Onyeisiala Buharị atụbeghị ukwu na Benuwe Steeti. Ndi ndu steeti ahụ sịrị na oge eruola ịkpọlitekwa mpaghara Obinetiti dịka o siri dị n’oge Josefụ Tarka ma ọ bụkwanụ ịchọ mmekọrịta ha na ndi Ndịda Ala anyị.
Ọtụtụ ndi ọnụ na-eru n’okwu na Benuwe kwukwara uche ha n’ọgbakọ ndi nile jibuworo ọkwa na steeti ahụ, ndi ndu agbụrụ dịgasị na steeti ahụ, nakwa ndi ochie dike steeti ahị nwere n’obi Gọọmentị Steeti ahụ na Makurudi.Madụ nile kwekọrịtara na Nghazigharị Usoro Ọchịchị ala a iji were dozie ọtụtụ ihe iche akamgba ji Naịjiriya ugbua.
N’okwu nke ya, Ichie Pọl Unongo kwuru sị, “A chọrọ m ime ka unu mata na site n’iwu otu mbaụwa (UN) na ọ bụrụ na Gọọmentị enweghịkwa ike ichekwa ndụ gị na i nwere ikike ichekwa onwe gi, n’udi ike gi ruru, ọ bụghị arụ. Ndi Benuwe, agaghịkwa a nọrọ a na-abọ ha ka ọkụkọ. Ọzọkwa, maka mmekọ anyị na ndi Ugwu Awụsa, o ruola mgbe anyị ga-emeta enyi ọhụrụ ga -abara anyị uru” Ochie dike a kwukwara na Buharị kwesịrị ịbịara ndi Benuwe mgaru, na ọ bụ ya mere ya jiri jụ iso ga hụ ya n’Abụja.
Ichie Ode Enyi, Nnukwu Onyeisi, ọgbakọ jikọrọ ndi agbụrụ Igede bụ Omi ‘Yi Igede sịkwara na ha enyela Gọọmentị Steeti ahụ nakwa ọgbakọ ndi Ezeọdịnala steeti ntuziaka ka ha pụọ n’ọgbakọ ndi Gọvanọ Ugwu Awụsa nakwa Ọgbakọ ndi Eze Ọdịnala ha, ma ọ bụrụ ogbugbu ndi be ha ka na -agakwa n’ihu.
Rev. Akpen Leva, onyeisioche otu jikọtara ndi ụka Kraịstị na steeti ahụ bụ Christian Association of Nigeria (CAN) kwuputara mwute ya na njem nleta ahụ nke ndi Gọvanọ Ugwu Awụsa, ka ọ gachara izuka atọ ejiri gbu ndi be ha. ” Ndi ụka hụtara njem ha dịka ịbịa chị anyị ọchị. Anyị ga-aga n’ihu ịchọ ikpemkwụmọtọ maka ụmụ anyị, ụmụ nwanyị anyị dị ime nakwa ndi okenye anyị e gburu na-eme nta, eme imo”
Previous Post: Ọhaneze akatọọla otu komiti Osinbajọ maka ọgbaghara ndi na-achị ehi na ndi ọrụ ugbo
Next Post: NTỊ